Agoosto | 2010 | WEEJIDOW
Archive for Agoosto, 2010
War Deg Deg ah: Madaxda sare ee dowlada KMG oo la qorsheenayo in ay ka guuraan Vila Soomaaliya
Agoosto 31, 2010
Warar isa soo taraayo oo aanu ka helayno ilo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaayo in madaxda sarare ee dowlada KMG la rabo qorsho looga rayaayo xafiiyadooda iyo hoygooda ee Vila Soomaaliya.
Dagaalada ka holcaayo magaalada Muqdisho oo maalintii sagaalaad galay ayaan waxaa uu si xawaaro ku jirto ugu soconaayaa meelo aan sidaasi uga fogeen guriga madaxtooyada ee Vila soomaaliya.
Waxaa shalay ku soo dhacaayey xarunta madatooyada waxyaabaha hubka culculus ay soo tuurayaa qolyaha ku kacsan dowlada ee Al-shabaab iyo Xisbul Islam ee dagaalada lagu hoobtay oo dhawaanahan ka iclaamiyey in lagu tuuro xukunka dowlada uu hogaaminaayo Sheekh Shariif.
Warakaasi isasoo taraayaan ayaa qorshaha waxaa uu yahay in saddaxda hogaamiye ee ugu sareeyo dowlada in ay ka guuraan una guuraan garoonka diyaarada agagaarkeeda.
Warar kale ayaa sheegaya: Dowladda Uganda ayaa daboolka ka qaaday inay ciidamo dheeraad ah u soo dirayso dalka Soomaaliya, kuwaasoo tiradoodu gaarayso 10-kun oo askari, oo ka mid ah ciidamada Keydka ah ee uu dalkaasi leeyahay.
Aronda Nyakairima Taliyaha Ciidamada Milateiga ee Dalka Uganda ayaa saxaafadda dalkiisa u sheegay in ciidamadan ay qayb ka noqon doonaan Ciidamada AMISOM oo difaacaysa Dowladda Soomaaliya ee uu Madaxweynaha ka yahay Sheekh Shariif.
Taliyaha Ciidamada Milateiga ee Dalka Uganda waxa uu sheegay in ciidamadooda ay gaynayaan dalka Soomaaliya markii ay kaalmo dhinaca ciidamada ah oo ay ku jiraan diyaarado ka helaan dalka Mareykanka, kaasoo horay ay IGAD uga codsatay inuu gacan ka siiyo daadgureynta ciidamadaasi.
Dowladda Uganda ayaa waxaa dalka Soomaaliya ka jooga in ka badan 4-kun oo askari oo ka mid ah ciidamada AMISOM oo ay qayb ka tahay dalka Burundi oo keliya, iyadoo dalal kale oo horay u ballanqaaday inay ciidamo u dirayaan Soomaaliya ayasan fulin balanqaadkoodii.
War Deg Deg ah: Dagaal xun oo ka dhacay Muqdisho maanta oo ay sagaal ku dhimatay
Ugu yaraan 9 qof ayaa ku geeriyootay in ka badan 20 kalana waa ay ku dhaawacmeen duqeyn galinkii danbe ee maanta lagu garaacay suuqa Bakaaraha sida ay BBCda u xaqiijiyeen goob joogayaal ku sugnaa suuuqa.
Dagaalada Muqdisho ka jiray 12 kii saacadood ee u danbeeyay waxaa ku dhintay ugu yaraan shan iyo tobban ruux soddon iyo lix kalena waa ay ku dhaawacmeen. Goor dhaweyd laba gaari oo minibus ah oo ah kuwa gaadiidka dadweyanaha ayaa waxaa ay miino kula qaraxday meel u dhaxeysa kulliyada Jaalle Siyaad iyo Xaruntii wasaarada gaashaandhiga, dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray dad rayid ah oo badan in kastoo aan weli tirada rasmiga aaney soo bixin.
DHAAYOW 9 JIR BAYDHABO KUNOOL, ANIGU SANADKAAN DHAR CIID MA RABO
Dhaq dhaqaaq ganacsi oo aad u xoog badan ayaa laga dareemayaa Suuqyada magaalada Baydhabo kuwaasi oo loogu diyaar garoobayo Munaasabadda Ciidul Fidriga ee dhawaan curanaysa.
Magaalada Baydhabo oo ah meel aad u nabdoon waayahaan dambe ayaa dadka ku dhaqan magaaladaasi waxay isku diyaarinayaan sidii ay u gelin lahaayeen xafladaha iyo munaasabadaha maalinta ciida oo inooga harsan maalmo qura.
Suuqa Bacaadlaha Baydhabo oo ah suuqa ugu weyn ganacsiga magaaladaasi ayaa shacab farabadani buux dhaafiyeen kuwaasoo inta badan dharca maalinta ciida loo iibinayo caruurta aan qaan gaarka ahayn iyo dadka waa weyn si maalinta ciida loo weyneeyo.
Goobaha lagu Iibiyo Dharka qeybihiisa kala gedisan ayaa Zazmada laga dareemayaa waxaana jira wax kala gadasho saaâ€™id ah waloow magaalada muqdisho oo dhaq dhaqaaqii gacni ay la laheyd magaalada Bayhdhabo uu yeraadey waayahaan dambe maadaama suuqii bakaaraha ay ku socotay duqeymo xoogan.
Isu soo wada suub duub dhaayow oowiil 9 jir ah Baidoanews.com ay wax ka weydiisey sida uu u arko bilashada dhowaan ciida ayaa waxa uu sheegey in sanadkaan uusan ciideynin maadaama ay caruur badani oo muqdisho kunool aaney ciideynin sanadkaan dagaalo halkaa ka socda awgeed, asaguna aan rabin lebiska ciida wuxuuna dhaayow sheegow oo sheegey in uu murugta la qeyb sanaayo caruurta soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho.
Warar kale: Talaado, August 31, 2010(HOL): Miino nooca dhulka lagu aaso ah oo ka qaraxday inta u dhaxeysay Kuliyaddii Jaalle Siyaad iyo Ex-Koontarool Afgooye ayaa waxay ku qaraxday seddex gaari oo nooca dadweynaha ah, kuwaasi oo ay la socdeen dad rayid ah oo u sii kala hoyaadayay Degmada Madiina iyo Ceelasha biyaha oo ah meelaha ay haatan baaqiga ku sii yihiin dad badan oo ka qaxay gudaha magaalada Muqdisho.
Qaraxaas miino oo aan la ogeyn in uu iskiis u dhashay iyo la qarxiyay ayaa wuxuu geystay dhimashada 9 ruux iyo dhaawaca 25 ruux oo kale, kuwaasi oo dhamaantood ahaa dad rayid ah. Seddexda gaari ayaa mid ka mid ah wuxuu ku socday degmada Madiina, halka labada kalena ay ku sii jeedeen deegaanka Ceelasha Biyaha.
Dadkii ku dhaawacmay qaraxaas oo qaarkood uu dhaawacooda aad u daran yahay ayaa waxaa la dhigay Isbitaalka Madiina oo inta badan la dhigo dadka ku dhaawacma gudaha magaalada Muqdisho.
Jidka uu qaraxa Miino ka dhacay ayaa waxaa uu yahay midka kaliya ee ay isticmaalaan dadka isaga kala goosha magaalada Muqdisho, waana markii ugu horreysay oo uu ka dhaco qarax waxyeello ka soo gaartay dad rayid ah. Waxaa mar mar dhici jirtay in Waddadaas qarax miino loogu geysto ciidamada Amisom ee ku jira Kuliyaddii Jaalle Siyaad iyo Ciidamada Dowladda.
Dhanka kalena, waxaa galabta si aad ah loo duqeeyay qeybo ka mid ah Magaalada Muqdisho, gaar ahaan Suuqa Bakaaraha iyo Xaafado ka tirsan Degmooyinka Boondheere iyo Yaaqshiid. Waxaa la soo sheegayaa in duqeyntaas ay waxyeello u geysatay dad rayid ah oo aanan waxba galabsan.
War Deg Deg ah: Hogaanka dagaalka dowlada oo la wareegeen hogaamiyaasha kooxaha Muqdisho
Agoosto 30, 2010
Ciidamaad AMISON ayaa amarka dagaalka ee ciidamada dowlada ku wareejiyey hogaamiyaasha kooxaha Muqdisho iyadoona ciidamada hadda tooska dagaalka ugu jira ay ka amar qaadanayaan Muuse Suudi ,Maxamed Dheere ,Qanyare iyo Cadqeybdiid
Ciidamadii hogaamiyaasha dagaalka ee Muqdisho ayaa xiligaan ciidamadooda keenay dhamaan goobaha dagaalka iyadoona hub kii dowladana lagu wareejiyey waxaana la soo warinayaan in AMISON ay xiligaan dagaalka iskula jiraan hogaamiyasha dagaalka Muqdisho oo iyagu cadaawtinimo gaamuurtay kala dhaxeeyo xoogag islaamiyiinta dagaalka wado Soomaaliya oo dhowrsano ka hor kula dagaalamayeen wadooyinka Muqdisho.
Tvga Aljasiira ayaa war bixin ka diyaariyey Soomaaliya sheegay in dagaalka xiligaan ka socda Muqdisho laga amarqaato hogaamiyasha kooxaha Muqdisho iyadoona TVga sheegay in dowlada xiligaan qaaba qoowseen ay kujirto sidaana amarka dagaalka lagu wareejiyey hogaamiyashii kooxa ee Muqdisho
Si kastaba ha ahtee dagaalka Muqdisho ayaa waji cusub yeeshay waxaana la arki doonaa xaalka meeshowo ku danbeeyo waloow arintaa amarka dagaalka looga wareejiyey dowlada uu aad u diidana a Madaxweyne Sheikh Shariif.
Warar kale ayaa sheegaya, Taliska Ciidamada Midowga Afrika ee ku sugan Muqdisho ayaa Caawa sheegay in Madaafiic ku soo dhacday Xarunta Madaxtooyada ay kaga geeriyoodeen ku dhawaad 5 askari oo ka tirsan AMISOM, kuwa kalana ay uga dhaawacmeen.
Xili maanta qeybo ka mid ah Magaalada Muqdisho uu ka socdey dagaal xoogan oo u dhaxeeyay Ciidamada dowladda KMG Soomaaliya oo gacan ka helayay AMISOM iyo kuwa Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab iyo Xisbul Islaam oo iyana isku dhinac ah ayaa waxaa dagaaladaasi qasaare dhimasho iyo dhaawacleh uu ka soo gaaray ciidamada AMISOM ee Fariisinka ku leh Xarunta Madaxtooyada ee Villa Soomaaliya.
Afhayeenka Ciidanka AMISOM ee kusugan Magaalada Muqdisho Gaashaanle Bariijiya Bahuuko oo Caawa Shabelle wareysi siiyay ayaa waxaa uu sheegay in Madaafiic ku dhacday Fariisin ciidamadoodu ay ku lahaayeen xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ay kaga geeriyoodeen 4 askari oo ka tirsan Ciidamada AMISOM iyadoo ay ku dhaawacmeen 8 kale sida uu carabka ku dhiftay Afhayeenka AMISOM.
Xarajada Mujaahidiinta Al Shabaab ayaa maanta waxaa ay ka sheegeen in duqeyn ay u geysteen xarunta madaxtooyada ay ku dileen dhowr askari oo ka tirsan ciidamada AMISOM ee ku sugan Magaalada Muqdisho.
War Deg Deg ah: Ciidamada Dowlada oo Al-Shabaab maanta kala wareegtey Mowlacii Macalin nuur ee Siigaale
Agoosto 29, 2010
Dagaal Xoogan ayaa Galabta waxaa uu ka dhacay Xaafado ka mid ah degmada Hodon ee gaar ahaan Xaafada Siigaale, halkaasi oo mudooyinkii ugu dambeeyay ay ku Sugnaayeen Al Shabaab, iyadoo dowlada KMG ay la wareegtay Mowlicii Macalin Nuur maanta.
Dagaalada galabta ka dhacay degmada Hodon ee gobolka Banaadir oo intooda badan goos goos ahaa islamarkaana ay bar bar socdeen Madaafiic cul culus ayaa waxaa ay dhexmareen Ciidamada dowlada KMG Soomaaliya iyo kuwa Xarakada Mujaahidiinta al Shabaab oo labadii Maalin ee la soo dhaafay ku sugnaa Xaafada Siigaale ee degmada Hodon.
Dagaalada ayaa inta la ogyahay waxaa ku dhintay sedax ruux oo rayid ah iyadoo sidoo kalana ay ku dhaawacmeen in ka badan 5 kale kuwaasi oo rasaas habow ah iyo madaafiicdii la is weydaarsanayay ay ugu tageen guryahooda.
Dagaalka goos goos ah markii uu soo gaba gaboobay, ayaa Afhayeenka Ciidamada Booliska dowladda KMG Soomaaliya Gaashaanle Sare C/laahi Xasan Bariise Waxaa uu sheegay in ciidamada dowladda KMG Soomaaliya galabta ay la wareegeen fariisin Al Shabaab ay ku lahaayeen Xaafada Siigaale ee degmadaasi Hodon.
Waxaa uu sheegya Bariise in Ciidamada dowladda KMG Soomaaliya sidoo kale ay la wareegeen gacan ku heynta Mowlicii Macalin Nuur oo Maalmo ka hor Ciidamada AL Shabaab ay kala wareegeen kuwa Culumaa’udiinka Ahlu Sunna waljamaaca.
Afhayeenk ciidamada Booliska Dowladda KMG Soomaaliya waxaa uu sidoo kale sheegay in ciidamada dowladda KMG Soomaaliya caawa ay ku suganyihiin fariisimo Xaafadaasi Siigaale ay horay ugu lahaayeen Ciidamada Culumaa’udiinka ahlu Sunna waljamaaca kuwaasi oo dhawaan ay kala wareegeen Al Shabaab.
Majiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab oo dhawaan qaar ka mid ah wariyayaasha Muqdisho u soo Bandhigay Masjidka Macalin Nuur oo ay la wareegeen ciidamo ka tirsan Al Shabaab.
Xaafadaha la isku horfadhiyo ee degmada Hodon ayaa Caawa laga maqlayaa dhawaqa rasaas teel teel ah iyadoo mararka qaarna ay dhacayaan madaafiic culus oo ay isku ridayaan labada dhinac ee halkaasi isku horfadhiya, waxaana halkaasi laga filan karaa saacad walba dagaal fool ka fool ah oo mar kale Ciidamada dowladda iyo Al Shabaab halkaasi ku dhexmara.
Duqeymo Xoogan oo ku socota xiligaan suuqa Weyn ee Bakaraha iyo dagaalo mar kale dib uga qarxey inta u dhaxeysa Dabka.
Taariikhdu Waa Tusmada Nolosha “Digilmiriflow” Q-1aad
BOQOL MEELOODO MEEL, DHIBAATOOYINKII LALA
BEEGSAN JIREY QOWMIYADDA DIGILMIRIFLE.
Sidaan horeba u soo sheegney gumeysiga soomaaliya wuxuu yimid 1894-ti wuxuuna ku soo galey “Ganacsi”, wuxuuna degey meesha la yiraahdo “Porto cecchio” ‘boorto jeekiyo’, waqtigii uu gumeystuhu soo galayey waxaa xukunka hayey “Saciid Barqash”, oo hadana ay raqdiisa ku danbeyso wadanka hada loo yaqaan “Tanzania” inta aan isku darsamin laba dal oo la isku yiraahdo Tanzania, meesha uu Saciid Barqash tagey oo uu degenaa asalkeeda waxaa la yiraahdaa “Zin-Zibaar”.
Kuwii teliyaaniga ahaa ee sheegtey in ay ganacsi u yimaadeen ayaa aheyd mid aan waxba ka jirin, waxeyna hoosta ku wateen gumeysi, waxeyna u qaylo dhaansadeen dowladoodii si loogu soo xoojiyo ciidamo, ayna ku soo rogaan dalka oo dhan xukun gumeysi, ayagoo heley dad soomaaliyeed oo u hogaansan waxey ayaga wateen, ciidankii ugu horeeyeyna waxaa looga soo direy dalka Liibiya, oo markaas si rasmi ah uu u gumeysanaayey, Markey waxba qaban waayeen ciidamadii Liibiya laga keeney oo cimiladii ku adkaatey, noqdeyna kuwo bukaan socod ah ayaa waxaa ciidamo kale laga dalbey dalka Telyaaniga, kuwaas ayaa u suurto gashey in ay wadankii ku soo rogaan gumeysi, gumeysigaasna waxaa ka soo hor jeestey xukunkii ka jirey soomaaliya, madaxna ka ahaa “Siciid Barqash”.
Ciidamadii gumeystaha talaabadii ugu horeysey ee ay qaadeen ayaa aheyd baabi’inta maamulada ka jirey dhamaan dhulka soomaaliya, gaar ahaan dhulka DigilMirifle, ayagoo hogaaminayey kuwo soomaali sheeganaayey oo la’aa meel ay u soo maraan maamulada dhulalkan ka jirey, ayna diidanaayeen hor u marka ay gaareen qowmiyadda DigilMirifle, rabeena in ay mar un arkaan xukuumadahooda oo mar un bur-bura, si ay u helaan meel ay ku beermaan oo mustaqbalka ula wareegaan, tey taminayeena waxaa u sahley gumeysi oo aan kala jecleyn waxa is heysta iyo waxa is dhaca, sababtoo ah waxaa asaga u fududaanaya dantuu watey, sababtoo ah hadey soomaalida dhexdeeda isku maqnaato asaga meel banana ayuu joogaa oo wax is hor taagayo ma laha, gumeysigan ka horna waxey ahaayeen kuwo ka quustey in ay la dagaalamaan qowmiyadan DigilMirifle, fursadey u heleen waagii gumeysiga uu soo galey dhulka DigilMirifle ilaa iyo hada waxey ku wadaan gumaad iyo dhul boobid.
Waxaa kaloo jirta markii ay arkeen ciidamadii laga keeney Liibiya oo cimiladii ku adkaatey, noqdeyna kuwo aan dhex galin Karin bulshada, telyaanigii markuu arkey in ciidamada liitaan ayuu dib u celiyey, wuxuuna markiiba ciidan ka qortey soomaalidii dhexdeeda, gaar ahaan kuwii u kaba qaadayey, wuxuuna sameeyey qorshe ah in gobol walba boqol “100” askari uu ka qorto, wuxuuna ciidamo ka sameystey meel alla meeshuu tagey oo aan ka aheyn dhulka Qowmiyadda DigilMirifle.
Sideed ‘8’ sano ka dib soo gelitaankii gumeysiga waxa uu soo gaarey Baydhabo asagoo wata ciidamo calooshood u shaqeysteyaal ah oo soomaali sheeganaya, qorteyna ka dib markii ciidamadii Liibiyaanka ahaa oo waxba ka qaban waayeen qorshihii loo keeney oo ahaa in ay dad baabi’iyaan si uu u hir galo gumeysigooda.
Gumeysigii wuxuu Baydhabo la yimid qorshihiisii hore oo ahaa in uu magaalo walba uu tago ka qorto boqol ‘100’ askari’.
Agoosto 28, 2010
Xarrakatul Shabaab oo saxaafadda tustay saldhig ay qabsadeen iyo dagaalo kooban oo maanta dhacay
Maamulka Xarrakatul Shabaabul Mujaahidiin ayaa maanta u soo bandhigay saxaafadda Muqdisho, saldhig ay ka qabsadeen Ahlusunna Waljamaaca, iyagoo sheegay in dagaalladii dhacay ay guulo ka gaareen.
“Maalmahaan waxaa socday dagaalkii aan ku baaqnay, waxaana ka gaarnay guulo la taaban karo, waxaana Alle ka rajeynaynaa inuu noo dhameystiro inta harsan,” ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Banaadir ee Xarrakatul Shabaab Sheekh Cali Maxamed Xuseen oo saxaafadda shir jaraa’id ugu qabtay Mowlaca Macallin Nuur ee degmada Hodan.
Sheekh Cali Maxamed wuxuu si kulul u weeraray Ahlusunna waljamaaca isagoo ku tilmaamay inay yihiin kooxo u adeegaya cadowga, isagoo cambaareeyay hadallada kasoo baxay Hay’adda Culummada Soomaaliyeed iyo Waxgarad kale, kuwaasoo ahaa in dagaallada socda aysan bannaaneyn.
“Dagaalka natiijo ayaan ka gaarnay, waxaana cadeynta ugu filan ay tahay inaan maanta joogno mowlicii Macallin Nuur oo ay horay ugu sugnaayeen cadow islaamka, kuwa dhahaya dagaallada natiijo laguma gaarayo waa cadow kale” ayuu yiri mas’uulka gobolka Banaadir ee Xarrakatul Shabaab.
Dhanka kale, dagaallo iyo duqeymo u dhexeeyay ciidammada dowladda oo gacan ka helaya kuwa AMISOM iyo Xarrakatul Shabaab ayaa maalitii lixaad ka dhacaya Muqdisho, kaasoo sababay dhimashada afar qof oo shacab ah, dhaawaca 12-qof.
Madaxa gaadiidka gurmadka deg-degga ah ee Nation-Link iyo Life Line Afrika Cali Muuse Sheekh ayaa sheegay inay dhaawacyada 12-qof ka qaadeen degmooyinka Muqdisho oo uu saameyay dagaalka maalintii lixaad ka dhacaya Muqdisho.
Ciidamada AMISOM oo ku sugan jidka Maka Al-Mukarama oo ay kusoo dhawaatay Xarrakatul Shabaab ayaa joojiyay gaadiidkii halkaas marayay, waxayna dhigteen gaadiidka gaashaaman.
War Deg Deg ah: Dagaal xoog leh oo maalintii lixaad Muqdisho ka socda
Dad ka badan boqol qof, ayaa ku dhintay, tiro ka badan 200 oo qof-na way ku dhaawacmeen dagaalada magaalada Muqdisho ka socda maalintii lixaad ee aan kala go’a lahayn.
Waxaa uu dagaalku u dhaxeeyaa Islaamiyiinta oo dhinac ah iyo ciidamada dawladda oo garab ka helaya kuwa AU ee nabad-ilaalinta.
4 qof ayaa ku geeriyootay 12 kalana waa ay ku dhaawacmeen dagaalka maalintii lixaad ka soconaya degmooyin ka tirsan gobolka Banadir, oo ay ku dagaalamayaan ciidamada dowladda oo gacan ka helaya AMISOM iyo xoogagga Islaamiyiiin ah ee ka soo horjeeda.
Dagaalada, ayaa waxa ay saamayn ku yeesheen wadada Maka Al-Mukarama oo ah wadada ugu muhiimsan ee ay isticmaalaan dowladda ku meelgaarka ah iyo AMISOM.
Tank ay leeyihiin ciidamada AMISOM oo dagaalka ka qaybqaadanaya.
Gaadiidka dadweyanaha, ayaa waxa laga xiray qeybo ka mid ah wadadaas gaar ahaan inta u dhaxeysa wadada shaqaalaha ilaa iyo Sayidka dagaalada awgeed, waxaana wadada laamiga ah ku sugan gawaarida gaashaaman ee ciidamada midowga Africa ee AMISOM iyo askarta dowladda ee difaacaya kooxaha weerarka ku haya.
Waxa weli la maqlayaa rasaas ay is weydaarsanayaan dhinacyada dagaalamaya.
Dhanka kale shir jaraaid, oo uu ku qabtay mowlaca Macalin Nuur ee degmada Howl-wadaag madaxa Alshabab ee gobolka Banadir Cali Maxamed Xuseen ayuu waxa uu ku sheegay in dagaalka ay guulo ka gaareen oo meesha uu shirka jaraa’id ku qabtayba ay tahay meel ay dagaalami jireen ‘cadowga Islaamka’, oo uu ula jeeday Ahlu-sunna Walajamaca.
War Deg Deg ah: Dagaalkii maanta la filaayey ayaa hadda ka bilowdey Muqdisho si saf balaaran ah
Agoosto 27, 2010
Dagaalo culus ayaa daqiiqado ka hor ka qarxay xafaadaha Muqdisho iyo wadada Maka Al-Mukarama. Iyadoo dagaalkan yahay mid la filayay oo Xoogaga Islaamiyiinta qorsheysanayay in ay ku soo qaadaan Ciidamada Dowlada iyo AMISOM.
Dagaalkan ayay Al-SHabaab horey u iclaamiyeen. Dagaalkan oo xoogaga hubeysan ay ku soo beegeen Maalintii Dagaalkii BADAR oo ku beegnaa maanta oo kale 17 bisha Ramadaan
Inkastoo dagaalka hadda bilowdey uu yahay mid si xoogan ku socda oo fool ka fool ah, waxa uuna ka duwan yahay kii saaka oo ahaa mid goos goos ah.
Madaafiicda ayaa laga maqlayaa Muqdisho oo idil. Iyadoo maalmahan ay soo galayeen ciidamo badan oo Al-Shabaab ah oo ka yimid Baydhabo iyo Kismaayo.
Waraka ayaa intaa ku darayo in dagaalka uu bilowdey waqti afurka ay dadka Muqdisho isku diyaarinayaan. Dagaalka hadda bilowdey ayaa is heysta ilaa degmooyinka Hodan, Howl-wadaag, Taleex, KM4, siigaale, tarabuunka iyo wadada Maka Al-Mukarama.
Warar kale ayaa sheegaya, Xoogaga Al-Shabaab ayaa si xoog iyo dagaal maanta Ahlu Sunna kala wareegtay Mowlicii Macalin Nuur ee degmada Hodon, iyadoo Ciidamadii Ahlu-Sunnah ay halkaas isaga baxeen.
Ciidamo aad u fara badan oo Itoobiyaan ah ayaa la sheegayaa in ay ku soo qulqulayaan gudaha dalka Soomaaliya, kuwaasi oo la sheegay saacadihii la soo dhaafay in ay soo gaareen halka loo yaqaan Feerfeer oo ka mida Gobolka Hiiraan.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Agoosto, 2010.